Jolay 21, 2018 Admin
CME Bitcoin hoavy tatitra mampiseho ny varotra boky 93% in Q2 2018
Ny lehibe indrindra manerana izao tontolo izao Dérivés tsena, ny varotra, Chicago Exchange (CME) ni-tweet fa ny eo ho eo isan'andro Bitcoin boky ny hoavy, dia nitombo iray goavana 93% ao amin'ny 2 lafiny ny 2018. koa, misokatra liana tamin'ny Bitcoin dia niakatra ny 58%, Izany Fanahy izany no ateraky ny over 2,400 fifanarahana.
Bitcoin hoavy eo ho eo isan'andro amin'ny Q2 nitombo boky 93% ny teo aloha tao an-tanàna, raha mahaliana misokatra nihoatra 2,400 fifanarahana, ny 58% mitombo. Mianara bebe kokoa momba ny varotra #Bitcoin hoavy: https://t.co/adjWVWXBPQ pic.twitter.com/UQWC3nGGrI
— CMEGroup (@CMEGroup) Jolay 20, 2018
Hitsiny sehatra fanangonam-bola ankehitriny StartEngine manaiky Bitcoin noho ny mampiasa vola amin'ny Fiarovana
StartEngine, ny fanangonam-bola ny hitsiny miorina Etazonia sehatra, dia nanambara fa manaiky fampiasam-bola fandraisana anjara in Bitcoin. naorina tamin'ny 2014, ny orinasa nanampy hanangana Renivohitra mahery 150 startups. Ny fanangonam-bola Fitsipika SEC Ny fitsipika milaza ny famatsiam-bola dia tsy maintsy miasa vavahadin-tserasera amin'ny banky & fivarotana ny volan'ny mpampiasa vola amin'ny escrow, mandra-startup mahatratra ny ambany indrindra lasibatra. Noho izany, StartEngine dia niasa tamin'ny Praiministra Trust, ny Nevada-monina banky, mba hahatanteraka izany toe-javatra.
Praiminisitra Trust dia tsy mitahiry ihany fa niova fo BitCoins ho USD, manao azy io voalohany Bitcoin banky hanohana sy hiaro crypto mpampiasa vola, araka ny fanambaràna iray avy amin'ny mafy. Mampiasa io endri-javatra io, raharaham-barotra dia afaka manangana ny indrindra ny $1.7 tapitrisa isan-taona. indrindra, StartEngine efa natsangana teo aloha $5 tapitrisa in famatsiam-bola.
$170M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao